Indlela yokwenza iphrofayili ye-backlink inzuzo usebenzisa i-backlink generator?
Bonke abanikazi bewebhusayithi bayaphupha ukwenza ibhizinisi labo kwi-intanethi libonakala kubathengi abanakho. Yingakho baqhuba umkhankaso wokuthengisa ophezulu, oquka ukucwangciswa kweenjini zokusesha, ukuthengiswa kweevenkile zentlalo, ukulandela izizukulwana zangasemva, kunye njalo. Ukuba unento yokwabelana nabathengi ababanzi, ngokuqinisekileyo kufuneka uyenze.
Isixhobo sokuqhagamshelanisa isakhiwo sesinye sezixhobo eziphambili ze-injini yokucwangcisa injini. Izixhumanisi ezingenayo ziyimfuneko ukuba ziphakanyiswe phezulu kwiikhangela zophando kwaye zikhangele abathengi. Benza umxholo wakho ubonakale kubaphulaphuli bakho abajoliswe kuwo kwaye uphakamise ukubuyela kwebhizinisi lakho kutyalo-mali.
Ukwakha iziqulatho ezingenayo akuyiyo isayensi ye-rocket kodwa ukufumana i-backlink kwiindawo eziphezulu ze-PR zingabonakala zinzima kakhulu kwi-newbie. Ngethamsanqa, kukho ininzi yolwazi olusetyenziswe emva kwe-backlink generators ekhoyo kwiwebhu kunye nabacebisi bokucwangcisa injini kunye nabakhi bezonxibelelwano, ngubani oya kukunceda ufumane i juice yekhontrakthi esemgangathweni kwiindawo eziphezulu ze-PR.
Kule nqaku, ndiza kukwabelana ngamanye amacebiso malunga nokuvelisa i-backfink backlinks mahhala. Ngaphezu koko, apha uza kufumana iindawo ezikhoyo ezilandelayo eziza kwenza iprogram yokudala izixhumanisi zangaphandle zikhululekile ngakumbi.
Imithombo yewebhu ekhonza njengama-generators backlinks
Apha uya kufumana uluhlu lwemithombo yewebhu apho unokufumana i-backlinks ezamahala kwixesha elifutshane.Ndiza kuthetha malunga nemithombo ebonakalayo yewebhu njengoMicrosoft, Facebook, Google, njalonjalo.
Ngaphambi kokuba siqale ukuthetha ngale mithombo, ndingathanda ukukhankanya ukuba kukho ezimbini iintlobo ze-backlinks - zenze iilandele kwaye zilandele. Ezinye zeendawo eziphakamileyo ze-PR zinika zombini ezi ntlobo zekhonkco - Google+, i-YouTube kunye nezinye. Ngokuphambene noko, iiplani zoluntu ezinqwenelekayo njenge-LinkedIn kunye ne-Facebook ziyakwazi ukwakha kuphela i-backlinks kuphela.
Ngamafutshane, ukulandela i-backlinks yilabo abagqithisa ijusi yekhonkco ukusuka komnye umthombo ukuya kwelinye kwaye bancedise ukuphakamisa isikhundla sewebhu ngegama elingundoqo. Ukulandela i-backlinks kunika amandla ekwakheni igunya lohlobo kwaye ubonise iGoogle ukuba imithombo ebalulekileyo yewebhu ifumanekile. I-Nof ilandele i-backlink yizona ziqhagamshelwano ezingadlulanga nayiphi na ijusi ye-link kwaye ayinakuchaphazela iphakamileyo lakho lephepha. Nangona kunjalo, banokwenza iphrofayili yakho yangasemva ifome ngakumbi xa ivela kwimithombo ephezulu ye-PR.
umthombo onobuninzi bexabiso kubasebenzisi behlabathi lonke. Yingakho ine-PageRank ephezulu. Ukufumana iziqulatho ezingenayo ezivela kule sayithi, uya kukwandisa igunya lakho lokuthengisa kunye nokuphakamisa igama lewebhusayithi emehlweni e-Google.
Ukudala i-backlinks evela kwi-Microsoft, kufuneka uhambe ngamanyathelo alandelayo:
Yenza i-akhawunti entsha kwi-Microsoft.
Ngena ungene kwicandelo leprojekthi.
Vula isigaba sekhonkco uze udibanise isiqhagamshelo sakho kwisicatshulwa sokubambisa.
Ukugqiba le nkqubo, chofoza inkinobho ethi "Gcina".
I-Google Plus yintanethi yentlalo yeGoogle. Unokufumana i-backlink esemgangathweni esuka kulo mthombo ngokulandela lamanyathelo:
Ngena kwiGoogle Plus usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Gmail.
Yakha ikhasi elitsha kwiblogi yakho.
Emva koko uqinisekise iphepha lakho.
kwaye ekugqibeleni, yongeza ikhonkco yakho kwicandelo le-URL.
Cofa kwiqhosha elithi "Gcina" Source .